Luxury Hunt ilizwe!
Umtsalane 1100 sq. ft indawo entliziyweni yeLizwe loHunt. Inqanaba elisezantsi lokungena labucala kunye nelokupaka. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, umenzi wekofu weNespresso, umshicileli waseFransi kunye nazo zonke iimfuno zekhitshi. Ukuhamba umgama ukuya kwiivenkile zekofu, iindawo zokutyela kunye neevenkile zakudala. Kufuphi neendawo zewayini, iiMeadows eziMkhulu kunye neendlela ezidumileyo zokuhamba ngebhayisekile. Indawo ekulungeleyo iimayile ezingama-40 ngaphandle kwe-DC, kanye ukusuka kwindlela engama-66 kodwa ibekwe emaphandleni.
Kufakwe izinto zangasese zoLuntu, imidlalo yabantwana, ukufikelela kwiinkonzo ezininzi zokusasaza kunye neelinen zodidi oluphezulu.
Amathafa yidolophu encinci yelizwe (ngokoqobo, uphawu olunye lokumisa) enevenkile yekofu kunye nebhayisekile, ungaphoswa yiValencia mocha latte. Bamba ukuluma ngokukhawuleza ukuze utye kwiBistro yePorch engaphambili okanye kwiSitophu sikaloliwe. I-Girasole inokutya okuninzi kwe-Italian okujikelezileyo okanye iNdawo kunye neMain ukuze ufumane indawo yokutya elungileyo.
Hlala phezulu kwigumbi eliphezulu kodwa uya kufumaneka kakhulu okanye kancinci njengoko ufuna!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- The Plains